Fanontaniana maro - DELF DALF MADAGASCAR
Inona ny dikan’ny famantarana DELF na DALF?
DELF : Diplôme d’études en langue française
Iza no mahazo manao ny DELF DALF ?
Ireo mpiadina rehetra maniry ny hanamarina ny fahaizany ny teny frantsay dia afaka manao ny DELF sy ny DALF tsy misy zavatra takiana alohan’izany. Tsy misy diplaoma ilaina vao afaka mandray anjara amin’ny DELF DALF.
Ireo terantany vahiny manana diplaoma amin’ny ambaratonga faharoa na ambaratonga ambony dia tsy afaka mandray anjara amin’ny fanadinana DELF sy/na DALF;
Ny DELF Ho AN’NY REHETRA, ho an’iza ?
Miantefa any amin’ireo olon-dehibe na tanora (feno 16 taona). Izy dia diplaoma mirona amin’ny lafin-javatra rehetra izay mamaly ny ankamaroan’ny hetahetan’ny olon-dehibe.
Ny DELF JUNIOR, ho an’iza ?
Io diplaoma io dia novolavolaina manokana ho an’ireo mpianatra ao amin’ny ambaratonga faharoa (mpianatry ny kolejy sy Lisea). Ny laza adina dia natao mifanaraka amin’ny taona sy mahaliana an’ireo zatovo.
Ny DELF PRIM, ho an’iza ?
Miantefa any amin’ireo mpianatry ny ambaratonga voalohany. Ny laza adina dia natao mifanaraka amin’ny taona ary mahaliana an’ireo ankizy. Ny bokikely anaovana fanadinana dia miloko, sy mampial
Ny DELF PRO, ho an’iza ?
Miantefa any amin’ireo olon-dehibe manana tanjona ny hiditra na isondrotra eo amin’ny sehatry ny asa mampiasa teny frantsay. Ireo mpiadina rehetra, na izy mbola manaraka fampianarana fototra, na manaraka fiofanana arak’asa na efa miasa, dia afaka mandray anjara daholo.
Ireo DELF DALF ireo ve manankery hatraiza hatraiza ?
Eny. Ny DELF sy ny DALF dia fantatra maneran-tany.
Ny DELF DALF ve manankery mandrakizay ?
Eny, ohatry ny diplaoma rehetra ihany, manankery foana izy.
Iroe mpiadina ve tsy maintsy mahazo A1 sy A2 vao afaka manao B1?
Tsia, ny diplaoma dia tsy mifampiakina. Izany hoe ny mpiadina dia afaka manao avy hatrany ny diplaoma izay mifanaraka amin’ny fahaizany frantsay.
Izaho manana diplaoma DELF B1 Tout public. Afaka mbola manao DELF B1 Professionnel ve izaho?
Tsia, ny DELF B1 n’inon’inona karazany (Junior, Tout-public, Professionnel) dia mitovy daholo ny lanjany ; ary tsy mety ny fanaovana indray ny diplaoma efa azo. Ny karazany dia tsy mipoitra eo amin’ny diplaoma azo.
Ahoana no ahafahako manomana ireo fanadinana ?
Ireo Alliance française 27, toeram-panadinana manokana nahazo alalàna, dia manolotra fampianarana manokana hanomanana ireo fanadinana ireo. Betsaka ireo boky fanomanana avy amin’ireo trano mpamokatra no misy eny amin’ny fivarotam-boky.
Eo amin’ny tranokalan’ny CIEP, ny mpiadina dia ahita karazana laza adina mba ahafahany manazatra tena: www.ciep.fr/delf-dalf
Eo amin’ny tranonkala ihany, ny mpiadina dia ahita fitaovana ao amin’ny tondro “Se préparer »
Ny mpiadina koa dia afaka manomana DELF na DALF amin’ny fampianarana ampitain-davitra izay iarahana amin’ny CNED. Fakan-kevitra: www.cned.fr.
Ahoana no ahafantarana hoe inona ny diplaoma tokony hosafidiana B1 ve sa B2 ?
Mila fantarina ny fahaizanao frantsay ary misafidy diplaoma izay mifanaraka amin’izay. Noho izany, afaka manantona ny Alliance française izay mikarakara fitsapana ary koa afaka manoro hevitra anao. Eto amin’ity pejy ity??????? , ireo mpiadina dia ahita famantarana ?????
Afaka mandray anjara foana amin’ny fanadinana ve izaho ?
Ny mpiadina dia afaka mandray anjara foana amin’ny fanadinana raha ilaina izany hatramin’ny ahazoana azy. Kanefa, tsy afaka manao ny diplaoma efa ananany izy.
Aiza no no afaka misoratra anarana ?
Misy 27 ireo Alliances françaises toeram-panadinana nahazo alalàna. Tsidio ny sarintany mba ahitana ny toerana akaiky anao indrindra.
Afaka misoratra anarana « en ligne » ve aty Madagasikara ?
Ny saram-panadinana ve mitovy daholo eraky Madagasikara ?
Eny, ny toeram-panadinana Alliance française rehetra dia mampiasa saram-panadinana mitovy. Io sarany eto an-toerana io dia ny “Service Culturel de l’Ambassade de France à Madagascar » no mamaritra azy.
Ny laza adina DELF DALF ve mitovy daholo any amin’ireo toeram-panadinana rehetra eto Madagasikara ?
Eny, mitovy daholo ny laza adina isaky ny toeram-pandinana rehetra. Ny fanadinana dia mitovy ny andro sy ny ora anaovana azy eraky ny firenentsika.
Ny diksionera tsotra ve azo ampiasaina mandritra ny fanadinana DELF sy ny DALF ?
Ny diksionera dia voarara ny fampiasana azy amin’ny fanadinana DELF afatsy:
– ny amin’ny DALF C1 ny diksionera dia azo ampiasaina mandritra ny adina am-bava.
– Ny amin’ny DALF C2, ny diksionera dia azo ampiasaina mandritra ny adina am-bava sy an-tsoratra.
Iza no mitsara ny fanadinana ?
Ny fanadinana dia tsarain’ireo mpampianatra amin’ireo toeram-panadinana Alliance française 27. Ireo mpampianatra ireo dia nahazo alalàna ny hitsara sy hanadina ny DELF sy DALF avy amin’ny CIEP, taorian’ny fiofanana manokana ary taorian’ny fahafahany tamin’ireo fitsapana izay nataony.
Afaka manohitra ny naoty izay azony ve ?
Tsia, ny fanampahankevitra ny mpitsara DELF sy ny DALF eto an-toerana dia tsy azo ovaina sy teherina.
Raha misy ny tsy fahombiazana, ny mpiadina dia afaka mijery ny taratasim-panadinana ao amin’ny toerana nanaovany fanadinana mba ahafahany mahalala ny lesoka tamin’ny tsy fahafahany.
Aorian’ny fanadinana, afirina aty aoriana no ahazahoana ny diplaoma ?
Ny diplaoma dia azo alaina telo ka hatramin’ny efa-bolana aorian’ny fotoam-pandinana. Misy tasatasim-pahafahana kosa azo alaina aoriana kelin’ny fivoahan’ny valim-panadinana. (eo amin’ny 4 hatramin’ny 6 herinandro aorian’ny fanadinana).
Ny naoty azon’ny mpiadina isaky ny ambaratonga (fahazoana am-bava sy an-tsoratra, famelabelarana am-bava sy an-tsoratra) dia miseho eo amin’ny diplaoma toy ny eo amin’ny taratasim-pahafahana.
Ny baccalaureat ve manamarina ny fahaizana frantsay ?